Wararkii udanbeeyey ee suuqa kala iibsiga ha udaymo laan
July 19, 2019 Hasan kaafi Kaafi jr
kula xafiiltanto koxoda Arsenal saxiixa weeraryahanka Crystal Palace Wilfried Zaha, kaasoo shalay kooxdiisa weydiistay inay iibiyaan xagaagan. (London Evening Standard)
Wakiilka Mino Raioa ayaa shaki geliyay maanta suurtogalnimada uu Paul Pogba ku bixi karo xagaagan isagoo soo jeediyay inay macquul tahay inuu iska sii joogo Manchester United, (Manchester Evening News)
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay inuusan ogeyn haddii Manchester City ay ciyaartoy kale la soo wareegi doonto inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga. (Manchester Evening News)
Tababare Frank Lampard ayaa sheegay inuu doonayo in daafaca Kurt Zouma uu baaqi ku sii ahaado Chelsea xilli ciyaareedka soo socda inkastoo Everton ay xiiseyneysay inay heshiis joogta ah kula wareegto. (Sky Sports)
Weeraryahanka Manchester United Romelu Lukaku ayaan ciyaari doonin kulanka berri oo Sabti ah ay kooxda la ciyaareyso Inter Milan iyadoo mustaqbalkiisa Old Trafford uu weli shaki ku jiro. (Sky Sports)
Arsenal ayaa goordhow la filayaa inay ku dhawaaqdo saxiixa 23 jirka weerarka ka ciyaara ee kooxda Gremio iyo xulka Brazil Everton Soares kaasoo tijaabada caafimaadka ku maray dalkiisa waxaana uu Emirates ku imaanayaa heshiis ku dhow 40 milyan euro. (Marca)
Goolhayaha kooxda Paris Saint-Germain Kevin Trapp ayaa ku dhow inuu heshiis 6 milyan euro ugu wareego kooxda FC Porto. (L’Equipe)
Kooxda Juventus ayaa heshiis 33 milyan euro ah la gaartay kooxda Roma oo ku aadan iibka weeraryahankeeda Gonzalo Higuain. Roma waxa ay xiddigaan marka hore kula wareegeysaa heshiis amaah ah iyadoo bixineysa lix milyan euro, ka dib waxay ku qasban yihiin inay ku iibsadaan 27 milyan euro. (Marca)
Kooxda Atletico Madrid ayaa u calaamadeysatay xiddiga khadka dhexe ee Tottenham Christian Eriksen xiddig u dhigma James Rodriguez haddii Real Madrid ay diido inay ka iibiso xiddiga reer Colombia. (Marc
Halkan ka daalaco waraarkii ugu danbeeyey ee suuqa kala iibsiga.
Algeria oo ku guuleystey koobkii qaarada afrika iyo senegal oo hungowdey.